Yoo namni Afaan Oromoo Dubbatu biyya bulche ummanni Oromoo dhumuu qabaa? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYoo namni Afaan Oromoo Dubbatu biyya bulche ummanni Oromoo dhumuu qabaa?
Gujii fi Wallaggarraa yeroo rib ummata fixu jijjiramaaf callisne jettanii yeroo ummanniHarargeerraa somaaleen buqqifte Gammoojjii Baalee qubate beelaan dhumuu fi daa’iimman abdii borii harca’aaniis callistaniima ilaaltuu?
Waaqayyoo kanas ni dabarsa warri amma calliftan gaafas taajjabbitti haftu.
Buqqaatonni Godina Baalee keessa jiran furmaata waaraa barbaadu.
yeroo hundaa akkuma namni beelaa fi dheebuun dhumuun gargaarsa baatii takka hincaalle itti geessanii biraa deemu, kuni garuu furmaata hin ta’u. Ummanni kun hedduun isaanii muka jala bulu, roobaa fi aduun dararamaa jiru, guyyoota darban kana keessatti daa’imman hedduutu beelaan dhume.
Mootummaan akka jedhutti ummata kun dhaabbataan gargaaraa jirra jedha.
Midhaan Magaazinaa asiin dura bahe Kaabinoonni mootummaa Godinaa fi Aanarra jiran walakkaa ol ni gurguratu. Kanaaf ragaan Bulchaa aanaa Barraaq kan ture midhaan buqqaatotaaf deemu kaabinee godinootaa wajjiin walii galee otuu gara konkolaataa 4tti fe’ee gara Booranaa oofuu Dalloo Mannaa irratti eeruu hawaasaatiin qabamee ture, iddoo hundatti kanatu ta’aa jira.
Mootummaan amma booda gargaarsa kan godhu yoo taate karaa Abbootii Amantaa fi maanguddoo biyyaa namoota hawaasni bakka buufateen raabsuu qaba.
Kan biraa information sassaabuufuu baaletti kan ulfaatu rakkinna bulchiinsa gaarii, malaammaltummaa Godinicha keessa jiruun buqqaatonnis rakkachaa jiru, waldaaleen gara garaa gargaarsaaf yeroo deemanitti kaabinoonni biiroo keessa jiran ummata kana gargaaruun haa hafuu danqaa itti ta’aa turan. Yoo rakkinni godiicha keessa jiru bahe aangoo dhabna jedhanii shakku, kun waan wayyaanee irraa dhaalaniidha. Warruma kaleessa hawaasa qircaa turetu ammas aangorra jira.
Yeroo ummanni achii dhumu aangawoonni Godinichaa maaf gabaasa hin dhiheessine? Maaf ummata kana hin hordofne, kaaznaa mootummaa keessa maallaqa ummata buqqa’eef ramadametu jira, maallaqni kun yeroo godinicha gahu kaabinootatu qoodata, ummata bira wanti gahu muraasa qofa.
#Fkn, Buqqaatonni Godinaalee oromiyaa guutuu keessa jiru, kan baalee kun maaf hammaate kan jedhuuf rakkinna bulchiinsa gaariitiin walqabata. Maraafuu yoo himne dubbiin hindhumtu, nama rakkinna ummata kanaa maaf dubbatteef tumamee hidhamee darame hedduutu jira.
Dhuma irratti buqqaatota naannoo Tigrai jiraniif waajjirri Galii Birrii Miliyoona 24 kennuu dhageenne, gargaarsi kun yeroo 7ffaaf kenname. Buqqaatonni Tigraay haalli isaan keessa jiran kan oromootiin yoo wal bira qabne ummanni keenna kan idileetuu jireenyaa sanaa gad ta’e jiraata. Buqqaatonni Tigraay mana itti galan qabu, nyaata, fayyaa, bishaaniifi gargaarsa hawaasummaa guutuu qabu. Keenna garuu muka jalatti dhumaa jira. madaalliin ilma namaa walcaaluu hinqabu. Kanaaf ummata oromoofi mootummaanis dhimma kana xiyyeeffannoo itti kennee hojjachuu qabaan dhaamsa kooti.Walitti deebina..
2007 በcomputer science ከማዳዋላቡ ዩኒቨርሲቲ የተመርቄ ከባለሥልጣን ቅጥ ስር ተለጥፎ Lotarii lammiin Lammiif በማለት ገንዘብ ከሰባሰበ በሗላ አስመጪና ላክ የሆነ የቀድሞ የህወሓት ደህንነት አባል
ሞቲ ሞረዳ ለህግ መቅረብ አለበት !
Oduu Galgalaa (Hagayya 07/2019)